ဓမ္မ Archives ⋆ Lovely Myanmar
Zawgyi ၁။ နိုးနိုးချင်း..မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမသည့်အတိုင်း၊ နိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထားမပြောင်းမရွေ.ပဲ ဝင်လေ ထွက်လေလေးကို သတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ်။ဒါဆို ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေကတစ်စက္ကန်.မှာ ကုဋေတစ်သိန်း နှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်းမဟုတ်တော့သည့်အတွက် မင်္ဂလာတရား ဖြင့်စတင်သည့်နေ.လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂။ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဟူသမျှ..အိမ်သာသွားရာ၊ သွားတိုက်ရာ၊ မျက်နှာသစ်ရာ တစ်မီးနစ်ပဲဖြစ်ပါရစေ၊ သတိကပ်၍ သိနေရန် ကြိုးစားနေလိုက်ပါ့မယ်။၃။ သက်ရှိထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားအား..၃.၁. မပြုမီဝမ်းသာ။ ရေတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားရှင်အားကပ်လှုရန် ပြင်ဆင်ရာမှာ ကုသိုလ်ပြုရတော့မယ်ဟု ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်နေပါ့မယ်။ ၃.၂. ပြုဆဲဝမ်းသာ။ဘုရားကပ်လှုရာမှာ သက်တော်ထင်ရှားရှိသည်ဟု မှန်းဆပြီး ကုသိုလ် ပြုရပြီဟု ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာဖြစ်နေပါ့မယ်။ ဒါဆိုကုသိုလ်က အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။၃.၃. ပြုပြီးဝမ်းသာ။ကုသိုလ်တို့ကို ပြုခဲ့ရလေပေပြီဟု ပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေလိုက်ပါ။ ၃.၄. ဥာဏ်ထဲ့လိုက်ပါ။ကုသိုလ်ပြုလျှင် …
ဒီလို ဆရာတော်မျိုး နောင်ပေါ်ဖို့ မလွယ် .. နိုင်ငံခြားမကြွလိုပါ
ယောဆရာတော်ကြီးသည် ငယ်စဉ် စာသင်သားဘဝကပင် မည်သည့်နေရာကိုမျှ အလည်အပတ်ကြွလေ့မရှိပေ။ စာဖြေခြင်း၊ တရားဟောကြွခြင်း၊ သံဃာ့ကိစ္စဖြင့်ကြွခြင်း စသည့်ကိစ္စများဖြင့်သာ ထိုထိုမြို့ရွာများသို့ ရောက်ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားဖူး အကြောင်းပြ၍လည်း ကြွလေ့မရှိပါ။ တပည့်များက ဘုရားဖူးကြွမလို့ပါ ဘုရားဟု လျှောက်လျှင်လည်း လက်မခံ ” သိမ်ထဲကဘုရားကို ဖူးသွားဦးလေ၊ အတူတူပဲ မဟုတ်လား”ဟုမိန့်လေ့ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ကြွဖို့ရန် ဒါယကာများက လျှောက်ထားကြလျှင်လည်း ” နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားတည်ထားပါပြီ၊ အတူတူပါပဲ၊ မကြွပါရစေနဲ့ ” ဟုမိန့်၍ကြွလေ့မရှိပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကြွဖို့ရာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လျှောက်ထားကြသော်လည်း မည်သည့်အခါမှ လက်မခံပါ ၊တချို့က နိုင်ငံခြား၌ ထူးခြားပုံ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပုံ၊ သာယာပုံတွေ ဗဟုသုတအဖြစ် ကြွရောက်ဖို့လျှောက်ထားလျှင်လည်း ” ဘုန်ကြီးအိုကြီးက မျက်စိမှိတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး အာရုံပြုလိုက်ရင် အတူတူပဲ ဖြစ်သွားပါပြီ၊ …
ရုရှားနဲ့ ဂျာမဏီမှာ ဒီလိုတွေဖြစ်နေပြီ
Zawgyi ဂျာမဏီမှာ ဒီလိုတွေဖြစ်နေပြီ ပူလောင်မှု့တွေ များလာတာနဲ့ အမျှ အေးငြိမ်းချမ်းသာရာဟအစစ်ရှာကြတာ ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူး ကိုးကွယ်မှု့ ဆိုတာ ဒုက္ခကိုကြောက်လို့ ရှာဖွေထားတဲ့အရာပါအခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အင်အားနည်းနေပေမဲ့ ခုလိုပူလောင်မှူတွေမျိားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ချမ်းသာရာအစစ်ကို ရှာဖွေနေကြပြီလေ အင်တာနတ်ခေတ်မို့ ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေ ဘယ်ဘာသာကာင်းဆုံးလဲလို့ရှာဖွေခွင့်ရတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အလျှင်အမြန်တိုးတက်စေဖို့အကြောင်းရင်းတခုပါပဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ဘုရားအတုတွေနဲ့အစစ် ကွဲပြားလာပြီ ဘယ်ဘာသာ အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ အဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ် နှစ်သန်းဖြစ်သွားပြီ တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ အရင်တုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ခုနစ်သိန်းရှိတယ်။ အခုတော့ အိမ်ခြေယာမဲ့ နဲ့ဘာသာမဲ့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီး ဝင်လာကြတာ အခုတော့ နှစ်သန်းတောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့။ ရုရှားသမ္မတနဲ …
သားသမီးများနှင့် ဘဝဆက်ပဌာန်းဆက်ပါရမီရှင်တို့ကို တိုက်တွန်းထားသော သစ်တံခါးဆရာတော်ရဲ့ နှိုးဆော်စာ
သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ သစ်တံခါးဆရာတော်၏ သားသမီးများနှင့် ဘဝဆက်ပဌာန်းဆက်ပါရမီရှင် သူတော်ကောင်းတို့ ၁၅.၈.၂၀၁၉ ကြာသာပတေးနေ့ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ မေတ္တာ အခါတော်နေ့ ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး တကမ္ဘာလုံး အေးချမ်း၍ စစ်ဘေးရန်တွေ ငလျှင်ဘေး ရေဘေး လေဘေး မီးဘေး စီးပွားရေး အကြတ်အတည်း ကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိမ်ဘုရား ( သို့မဟုတ်) မိမိယုံကြည်ရာ ဘုရားတွင် အောင်သပြေ ၂၁ ညွှန့် သစ်သီးဆွမ်း ၁၀ မျိုးဆွမ်းတော် ၁၀ ပွဲ ရေတော် ၁၀ ခွက် ဆီမီး ၁၀ တိုင်တို့ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ၅ ပါးသီလ (သို့) ၈ ပါးသီလ ခံယူ စောင့်ထိန်းပြီးလျှင် မေတ္တာသုတ် ၅၂၈ ခေါက်ရွတ်ပြီးပူဇော်ကြပါ။ မေတ္တာပို့ပါ။မေတ္တာဖြန့်ကြပါဟုသတ္တဝါတွေ အေးချမ်းစေဖို့ …
By ku ku on Monday, August 12, 2019
မျက်နှာသစ်တိုင်း အရယူရမည့် ကုသိုလ် (၅) မျိုး (၁)- “ဒါနကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရေဖလားထဲကို ရေထည့်လိုက်ပါ မျက်စိနဲ့မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်တော့ မမြှောက်လိုက်ပါနဲ မတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ လက်ကကိုင်ထားတဲ့ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ၏ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သောအားဖြင့် မျက်နှာသစ်တော်မူပါဘုရား” လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ (၂)-“ဗုဒ္ဓနုသာတိကုသိုလ်” မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာသစ်တော်ရေ အသုံးပြုနေတုန်းမှာ အရဟံကို အနက်(၃)ခုနဲ့ ပွါးလိုက်ပါ အရဟံ – ကိလေသာ မြူမှုန်ပင် ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား အရဟံ – ပူဇော်အထူးကို အထူးခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား အရဟံ – ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်မှာပင် မကောင်းမှုကို မပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ဒါဆို ဗုဒ္ဓနုသာတိကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ …
စစ်ကိုင်းမြို့ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီး ကောင်းကင်မှာ အရိပ်ထင်လာပုံ ဖူးထိုက်သူများ ဖူးနိူင်ကျပါစေ
စစ်ကိုင်းမြို့ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီး ကောင်းကင်မှာ အရိပ်ထင်လာပုံ…. ဖူးထိုက်သူများ ဖူးနိူင်ကျပါစေ. ‌နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Photo – Original mm
သင့်ကို အကျပ်အတည်း အမျိုးမျိုးမှ လွတ်မြောက်စေတဲ့ အဓိဌာန်ဝင်နည်း
တနင်္ဂနွေ နေ့ကနေ စပြီး အဓိဌာန်ဝင်ပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့ – တနင်္ဂနွေထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၆ ခေါက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား မြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ။ မိမိကုသိုလ် အလုပ် အားလုံးပြီးစီးသည့်အခါ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျတို့ကို မေတ္တာပို့အမျှဝေပါ။ တနင်္လာနေ့ – သောကြာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၂၁ ခေါက်၊ သောကြာနေ့ဖွား မြတ်စွာဘုရားရှင် အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါ။ မိမိကုသိုလ် အလုပ် အားလုံးပြီးစီးသည့်အခါ သောကြာဂြိုဟ် နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျတို့ကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ။ စသည်ဖြင့် အထက်ပါအတိုင်း အတိုချုံးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ အင်္ဂါနေ့ – ရာဟုထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၁၂ ခေါက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ – ကြာသာပတေးထောင့်၊ …
အကုသိုလ် ဂြိုဟ်မွှေလာပြီဆိုမှဖြင့် ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ချင်စိတ်မှ မရှိဘူး။ မကောင်းသော ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်တွေ သောင်းကျန်းလာတယ်။ မကောင်းသောစိတ်ကို မွေးမြူလာတတ်တယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်နေပေမဲ့ လူတွေက မကောင်းဘူးလို့သာ ထင်လာတယ်။ ဒါမိမိ အကုသိုလ်တွေ ဝင်လာတယ်။ သူတပါးအပြစ်ကို မကြည့်နဲ့။ ကိုယ်အပြစ်ကိုသာ အဖန်ဖန်၊ အထပ်ထပ် ဆုံးမနေပါတော့။ ကိုယ့်သီလကို မြဲမြဲစောင့်၊ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်၊ ဝိပဿနာဉာဏ်ထင်ရှားနေပါစေ။ သူတပါးအပေါ် အပြစ်မမြင်ပါစေနဲ့။ Credit:_ မြောက်ဦးဆရာတော် Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အကုသိုလျ ဂွိုဟျမှလောပွီဆိုမှဖွငျ့ ဘယျကုသိုလျလုပျခငျြစိတျမှ မရှိဘူး။ မကောငျးသော ကိုယျ၊ နှုတျ၊ စိတျတှေ သောငျးကနျြးလာတယျ။ မကောငျးသောစိတျကို မှေးမွူလာတတျတယျ။ ကိုယျက ဘယျလိုကောငျးအောငျ လုပျနပေမေဲ့ လူတှကေ မကောငျးဘူးလို့သာ ထငျလာတယျ။ ဒါမိမိ အကုသိုလျတှေ …
Zawgyi ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို ပုတီး (10)ပတ်ရအောင်ခွဲ၍ စိပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့်နေ့ သားသမီးမဆို တနင်္ဂနွေ ည ကိုးနာရီမှ ည ဆယ်နှစ်နာရီးအတွင်း အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် စိပ်ပါ။နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ထိ ညရှစ်နာရီတိတိ ညစဉ်စိပ်ပါ။ နေ့စဉ် (10) ပတ် စိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။စိပ်ရမယ့် အချိန်အတူတူပါဘဲ။ ဘုရားရှင်အား သောက်တော်ရေချမ်းများ ဖယောင်းတိုင် အမွှေးတိုင်များပူဇော်၍ စိပ်ပါ။သတိပြုရန်မှာ ပုတီးစိပ်နေသော ရှစ်ရက်အတွင်း မိမိအလိုချင်ဆုံး အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆုတစ်ခုသာ တောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤပုတီးစိပ်နည်းကို အလုပ်ရှာနေသော ညီမငယ်တစ်ဦးအား စိပ်စေရာ တစ်လအတွင်း ခန့်မှန်းထားသည်ထက် လစာပိုကောင်းသော အလုပ်ရသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ၍ မိဘအိမ်ပြန်နေသူ ညီမငယ်တစ်ဦးက ပုတီးစိပ်ပြီး ရက် နှစ်ဆယ် အကြာတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ မိဘများအားတောင်းပန်၍ လိုက်လံ ခေါ်ဆောင်ကြောင်း …
Zawgyi7ways to live better Karma ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၇ မျိုး 1. Live in the present ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာ 2. Show kindness တပါးသူကို မေတ္တာထားပါ အများအကျိုးရှိမှာလုပ်ပါ ကိုယ်တယောက်ထဲ ကောင်းစားသွားမယ့် လမ်းမရွေးပါနဲ့ 3. Express gratitude ဘယ်လောက်ပဲ ဘဝဟာဆိုးနေနေ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးရှိဖူးတွေ ရှိစအမြဲပါ ဒီလူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသပါ 4. Grow in love ချစ်တတ်ပါ …